Fan သည် LEGO Fortnite 'gameplay' ဗီဒီယိုကိုဖန်တီးသည်
23 / 07 / 2018 08 / 09 / 2018 ဂရေဟမ် 1497 Views စာ0မှတ်ချက် animation ရဲ့, Fortnite, Lego, Lego ကမ္ဘာ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, YouTube ကို
တစ် ဦး ပါရမီ Lego ကမ္ဘာပန်ကာတစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည် Lego Fortnite တိုက်ပွဲ Royale ဗီဒီယို။
Bearly Regal ကဒီဗီဒီယိုကို YouTube မှာဝေမျှထားပါတယ် Eurogamer, သောအရာကိုစိတ်ကူး Lego Fortnite ဗီဒီယိုဂိမ်းကကြည့်ကောင်းနေလိမ့်မည်။ အလွန်အမင်းလူကြိုက်များသော Fortnite ဗီဒီယိုဂိမ်းသည်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိပရိသတ်သန်းပေါင်းများစွာ၏အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပြီးယခုဤဗွီဒီယိုသည်အသေးအဖွဲပုံများပါသည့်ဗားရှင်းမည်သို့ခံစားရမည်ကိုဖမ်းယူထားသည်။
တည်ဆောက်, ရန်ပွဲနှင့်အုတ်တက်မှုတ် Lego Fortnite တိုက်ပွဲ Royale!
စစ်ကားတစ်စီးနှင့်ကုန်းပေါ်မှခုန်ချပါ Lego စောင်းမျှော်စင်၏အပန်းဖြေ။ Amass သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့်လက်နက်ဖြင့်သေဆုံးသည်။
သုံးပြီးအကြောင်းအရာဖန်တီးပြီးနောက် Lego ကမ္ဘာကြီး၊ လူနာတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်အမှန်တကယ်ခံစားရသည့်ခံစားမှုကိုသေချာစေရန် Fortnite user interface ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဤနေရာတွင်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောအရာမှာအကျော်ကြားဆုံး Fortnite တည်နေရာရှိ Tilted Towers သည် sandbox ဂိမ်းမှပေးသောအကန့်အသတ်မရှိသောအုတ်များကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည်အားဖြည့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Lego ကမ္ဘာသည် ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးပေါ်တွင်ဝယ်ခြင်းငှါမရရှိနိုင်ပါ.
← Great LEGO Race VR Experience ကိုယူကေ၊ မန်ချက်စတာတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်
တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ: သင်္ဘောပေါ်တွင်အားလုံး →